Iindaba-I-White Cross-ehambelana nePolyethylene Foam Gaskets
Isisele esivaliweyo somnqamlezo odityanisiweyo we-polyethylene foam sinokuhlala siyenye yezona zinto zibalaseleyo zegasket gasket. Igwebu le-polyethylene lineendidi ezimbini eziphambili - ikhemikhali ye-polyethylene enxibeleleneyo ne-foam kunye ne-irradiation enxulumene ne-polyethylene foam. Eyokugqibela ibhetele kwaye isetyenziswa rhoqo njengegasket gasket yeemarike kubandakanya ezonyango, izixhobo ze-elektroniki, ukupakishwa kwezithambiso, izinto zeemoto, njl.
I-gasket ye-polyethylene foam gasket enqamlezileyo inentsebenzo entle kwiipropathi ezibonakalayo.
Indawo yokuthuthuzela egudileyo kunye nokugqibezela okusingqongileyo
Ukuxhathisa kwepremiyamu ukufuma, imozulu kunye neoyile
Ukugqwesa okugqwesileyo kwe-thermal kunye ne-acoustic
Ukusebenza kakuhle kobude
Ifumaneka kuluhlu olubanzi lokuxinana kunye nemibala
Isakhiwo seseli esivaliweyo sokufunxa amanzi asezantsi kunye nokuhanjiswa komphunga.
Imitha ye-polyethylene foam gasket enezinto ezinokuguquguquka. Uluhlu lobunzima luyafumaneka ukusuka kwi-0.08 mm ukuya kwi-8 mm. Ezinye ubukhulu zingenziwa ngokwesiko ngenkqubo ye-foam lamination. Ukuxinana kunokubakho ukusuka kwi-28 kg / m³ ukuya kwi-300 kg / m³. Imibala ye-foam eqhelekileyo imhlophe kwaye imnyama. Eminye imibala ungenziwa ngemfuneko kuquka blue, oluhlaza, obomvu, orenji njalo njalo.
Ityala labathengi-Isicelo seMveliso yeGwebu
I-gasket ye-foam yesiko emhlophe
umthengi. Baza kusebenzisa le nto ye-PE foam gasket njengesiqhoboshi esidibeneyo samalungu abo eemoto. I-polyethylene foam gasket yethu enqamlezayo isebenza njengesahlulo sokukhusela kunye neoyile kunye nokuxhathisa amafutha. Ngenxa yobuchule babo bokunweba, basebenza kakuhle xa iinxalenye zeemoto zisebenza.
Senza Njani Le Gasket yeGwebu
Izinto zokwenza le gasket ye-foam kukukhanya kwe-polyethylene amagwebu anqamlezayo kunye nomyinge wokwandiswa kwamagwebu amaxesha ali-15 kunye no-65 kg / m³ wobunzima. Ubungakanani be-gasket yi-130 mm x 98 mm x 1 mm ngesiko lokusika lokufa.
1) iseli evaliweyo ye-polyethylene foam gasket materialKuqala kufuneka siqinisekise kunye nomthengi kwimveliso yeCAD. Imizobo ye-CAD yemveliso kungcono ukuba ibonelelwe ziinjineli ezivela kubathengi. Kwelinye icala, ukuba umthengi uswele inkxaso yoyilo lwe-CAD, sinokwenza loo nxalenye yoyilo lobunjineli kwimveliso yabathengi.
2) Emva kokuqinisekisa umzobo we-CAD we-foam gasket, siya kwenza isinyithi sife ukusika isikhunta ngokwemizobo eqinisekisiweyo. Xa die ukusika sokubumbela ukulungele, abasebenzi bethu mveliso uya amalungiselelo imveliso ngobuninzi.
3) Ngokuphathelele ekuveliseni okwenziweyo kwesixhobo se-foam gasket, kufuneka sizalisekise inkqubo engezantsi yemveliso:
Custom sawing amagwebu
I-polyethylene foam yentsusa lolunye uhlobo lwezixhobo zegrafikhi ezikhutshelweyo. Ziza ziqengqelekile kungekho ephepheni, abasebenzi bethu basefektri kuya kufuneka basebenzise oomatshini bethu bokucheba nkqo ukubasika kwimakhishithi. La maqhekeza e-polyethylene amagwebu asikiweyo kufuneka ubuncinci alingane nobungakanani bentsimbi yokusika okanye enkulu.
Lungisa i-die cutter kwaye ufake isixhobo sokusika ukuze usebenze ngendlela efanelekileyo yokusika
Phambi kokuba imveliso, iinjineli zethu imveliso kufuneka ngononophelo ezimhlophe iseli evaliweyo polyethylene amagwebu gasketsinstall die die ngumngundo kwaye uyenze kakuhle ehambelanayo kunye die oomatshini ukusika. Le nkqubo yokuvavanya ukungunda ithatha ukulahleka kwexesha kunokuba umthengi ecinga njalo. Ngokubhekiselele kwisiphumo sokusika ngokuchanekileyo, siya kusebenzisa inxalenye yezinto eziphathekayo ze-foam ukuqinisekisa ukuba isikhunta sensimbi sifakwe kakuhle. Emva koku, imveliso yesininzi inokuvunywa ukuba ihambe.
4) Inxalenye yokugqibela ekufuneka siyenzile kukupakisha ngokwesiko kwiimveliso zegwebu ezigqityiweyo ngaphambi kokuthunyelwa. Siza kupakisha i-gasket yesiko yokuhambisa okungcono. Ukupakishwa kwesiko njengebhokisi yephepha lokuprinta kunye neengxowa ezininzi ziyafumaneka kuthi ngokuxhomekeke kwiimfuno zabathengi.
Kule projekthi ye-Polyethylene foam gaskets apha ngezantsi iyafuneka